आज कुन राशिको भाग्य कस्तो होला ? आफ्नो राशिअनुसार हेर्नुहोस्
मेष तपाईको विश्वास र आध्यात्मिकता प्रतिको दृष्टिकोणले तपाईको व्यक्तित्वमा बढी सकरात्मक बनाउँदैछ । केहि समयका लागि चिन्ता र समस्याबाट मुक्त हुनुहुनेछ । व्यस्तताको बाबजुद आफन्त र साथीहरूको लागि समय निकाल्दा सम्बन्ध अझ बलियो हुन्छ । वृष नजानेको ठाउँमा जादा अपमानित हुनुपर्ला । प्रतिस्पर्धीहरु सक्रिय रहनेछन् । स्वास्थ्य ठीक हुनेछ तर वर्तमान वातावरणको प्रतिकूल प्रभावहरूबाट आफूलाई जोगाउन निश्चित गर्नुहोस् । मिथुन आज सबै कामहरू आफै गर्न प्रयास गर्नुहोस, अरूबाट मद्दतको आशा नगर्नुहोस् यो नै उपयुक्त रहन्छ । कुनै पनि ...
कस्तो होला प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन?
काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्ने भएका छन्। केही दिनमा बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा उक्त राजनीतिक प्रतिवेदन पेश हुनेछ। उक्त प्रतिवेदनलाई नै केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तावका रूपमा लैजाने नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। बढ्दो कोभिड-१९ को सङ्क्रमणका कारण स्थायी कमिटी बैठक भने निश्चत भएको छैन।
काठमाडौं : कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा सरकारले गत वर्ष देश पूरै लकडाउन गर्‍यो। संक्रमण फैलिन नदिन गरेको लकडाउनले हरेक क्षेत्र ठप्प भयो। मानिसको जमघट हुने/नहुने प्रायः सबै क्षेत्र बन्द भए। लकडाउनले देशभरका शैक्षिक क्षेत्रमा निकै ठूलो असर पर्‍यो। करिब ९ महिना देशभरका शिक्षण संस्थामा भाैतिक उपस्थितिबिनै कक्षा सञ्चालन भए। कतिपय स्थानका विद्यार्थीले त विद्यालय देख्न मात्र होइन, किताबसमेत पढ्न पाएनन्। निजीस्तरमा अनलाइन तथा भर्चुअल माध्यमबाट पढाइ भए पनि सामुदायिक तथा सरकारी व
मेष-भाग्यशाली वर्ष रहनेछ । वृहस्पति र शनि ग्रहले राम्रो फल दिनेछन भने राहु र केतु ग्रह प्रतिकूल रहेकाले केहि कुरामा ध्यान दिनु पर्नेछ । स्वास्थमा सङ्कट, पैसा फस्न सक्ने, चोटपटकको भयले सताउला । नोकरीमा आफ्नैबाट खिचातानीको शिकार हुनु पर्ला । मानसिक स्वास्थमा खलल पुग्नसक्ने सम्भावना छ । सुरुवातमा पठन-पाठनमा सुष्तता देखिएता पनि पछि राम्रो हुनेछ । विदेश योग त्यति राम्रो छैन । नोकरीको हकमा पदोन्नति हुन सक्ने योग पनि रहेको छ । धार्मिक कृत्य तथा मनोरञ्जनमा मन लाग्नाले आंशिक व्यय हुनेछ । सामाजिक कार्यमा रुची, इस्टमित्रमा मेलमिलापको स्थि...
Lokaantar 25 दिन पहिले
छिमेकी मुलुकहरूमा भारतले अपनायो खोप कूटनीति, कस्तो होला फाइदा ?
सोमवार विश्व स्वास्थ्य संगठनले आफ्नो कोभ्याक्स खोप कार्यक्रमका लागि अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेका खोपलाई स्वीकृति दिएको छ । कोभ्याक्स कार्यक्रमले विश्वका गरीब मुलुकहरूलाई समतामूलक पहुँचका आधारमा कोभिड खोपहरू उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । संसारको सबभन्दा ठूदो खोप निर्माता सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले यसका लागि १ अर्ब १० करोड डोज बनाउने सहमति गरेको छ । भारतले आफ्नो उत्पादन क्षमताको उपयोग गर्दै विश्वको औषधालयका रूपमा विश्वव्यापी छवि चम्काउनका लागि आफ्नै पहलकदमी गरिरहेको छ । भारतले देशमै निर्माण गरिएका को...
कस्तो होला प्रचण्ड-नेपाल पक्षले सार्वजनिक गर्न लागेको प्रतिबद्धतापत्र ?
नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले राजनीतिक दस्तावेजका रूपमा प्रतिबद्धता पत्र लेख्ने सार्वजनिक भएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राजनीतिक रूपमा दुई चीरा भएको नेकपाको पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपाल नेतृत्व पक्षले छिटै प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा रहेको नागरिक समाजले प्रचण्ड-नेपाल पक्षले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । त्यो मागलाई पनि सम्बोधन हुने गरेर प्रतिबद्धता पत्र लेख्नका लागि कार्यदलसमेत गठन भइसकेको छ । संघर्ष समितिका संयोजक नारायणकाजी श्...
काठमाडौं — आजकलका मानिसको सबभन्दा प्यारो वस्तु मोबाइल फोन बनेको छ । उनीहरू जतिखेर पनि मोबाइलमा झुण्डिरहेका भेटिन्छन् । तर अमेरिका जस्तो विकसित देशमा एउटा यस्तो शहर छ, जहाँ न मोबाइल छ, न वाईफाई छ, न रेडियो छ । वेस्ट भर्जिनियामा पोकाहोन्टास काउन्टीमा रहेको ग्रीन बैंक शहर संसारकै सबभन्दा शान्त क्षेत्र हो । शहरमा कसैले पनि मोबाइल फोन प्रयोग गर्दैन । त्यहाँ रेडियो र टेलिभिजन पनि छैन । आधुनिक प्रविधिबाट यो मुक्त छ । ग्रीन बैंकमा संसारको सबभन्दा ठूलो यताउति चलाउन मिल्ने रेडियो टेलिस्कोप छ । त्यो भएको हुनाले ...
नेपालमा पहिलोपटक सुरु हुन लागेको भर्चुल शैक्षिक मेला कस्तो होला || Prakash Pandey
को बन्ला २०२१ मा बलिउडको 'असली हिरो' ?
२०२१ मा दर्जनौं फिल्म सार्वजनिक हुनेवाला छन्। आर्थिक रुपमै धरासयी भएको बलिउडको व्यापार कस्तो होला र यस वर्ष कुन कलाकारका फिल्मले कस्तो व्यापार गर्ला भनेर अनुमानहरु सुरु भएका छन्।
कस्तो होला पर्यावरणमैत्री खान्की ?
वैज्ञानिक भन्छन् कि, यदी जलवायु परिवर्तन, पानीको श्रोत र प्रदूषण जस्तो समस्या हटाउनका लागि अब विश्वले फ्लेक्सीटेरियन डाइट अपनाउनुपर्नेछ । तपाईं पक्कै अचम्मित हुनुभयो होला, के हो फ्लेक्सिटेरियन डाइट ? यो पूर्णत भेज होइन । ननभेज पनि होइन । भेजिटेरियन र ननभेजिटेरियनको मिल्दोजुल्दो रुप हो । फ्लेक्सिटेरियन डाइटमा मासु पूर्णत त्याग गरिदैन । बरु आफ्नो […]